डान्सर सुशान्तलाई प्रहरीले के गरेको थियो ? चर्चित विषयको वास्तविकता यस्तो छ – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on डान्सर सुशान्तलाई प्रहरीले के गरेको थियो ? चर्चित विषयको वास्तविकता यस्तो छ
काठमाडौ । डान्सर सुशान्त खत्रीले आफुलाई प्रहरीले दुब्र्यवहार गरेको भन्दै सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत लाइभमा बताएपछि सो घटना चर्चामा आएको छ । प्रहरीलाई केही कुरा भन्न चाहेको भन्दै लाइभ आएका खत्रीले आफूलाई प्रहरीले बिना कसुर पक्राउ गरेको र दुब्र्यवहार गरेको बताएका थिए । प्रहरीले आफुलाई झापड लगाएको समेत उनको दावी छ ।
टिकटक लाइभमा आएर उनले भनेका छन् –‘ह्या लो विन नाइट थियो, हामी रमाइलो गरेर निस्कन लागेका थियौँ, प्रहरी आएर मलाई दुर्व्यवहार गरेर निकाल्यो ।’ आफुले पैसा तिर्न काउन्टरमा जाँदा प्रहरीले गलामा समातेर बाहिर निकालेको उनको भनाई थियो ।
काठमाडौँको ठमेल स्थित सिनेट क्लबमा सोमबार बिहान निस्कने क्रममा यस्तो घटना भएको शुसान्तले बताएका छन् । क्लबमा बिल तिर्न बाँकी रहेको हुनाले आफू केही बेर अलमलिँदा प्रहरीले त्यस्तो ब्यवहार गरेको उनले बताएका छन् । क्लबमा झापड लगाएर महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेमा लगेर थु ना मा राखेको सुशान्तको आरोप छ ।
सन् २०१२ को भारतीय रियालिटी शोमा छनोट भएर उत्कृष्ट १० सम्म पुगेका सुशान्त पछिल्लो समयमा नेपालमा मात्र नभएर पनि चर्चित डान्सर हुन् । उनको नेपाल र भारतमा लाखौँ फ्यान छन् । प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहारको बारे आफू चुप नलाग्ने उनको भनाइ छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका डिएसपी दुर्गा दाहालले चाहिँ सुशान्तको कुराको प्रति वाद गरेका छन् । ठमेल क्षेत्रका क्लब सामान्यतया बिहान ४ बजे बन्द हुने भए पनि सुशान्त सिनेटमा बिहान ५ बजे भेटिएको प्रहरीको भनाई छ । क्लबमा सुशान्त र उनका साथीहरूबाहेक कोही ग्राहक नभएको पनि प्रहरीले दावी गरेको छ ।
← ओखरको काठबाट नेपालमा बनेको आकर्षक घडी, जति नेपालीपन उत्ति नै लक्जरी → जब शाहरुखले आमिरलाई किन काजोलसँग काम नगर्नू भने ?